Linux Mint 18.1 Serena Xfce Edition Beta Nwere | Site na Linux
Linux Mint 18.1 Serena Xfce Edition Beta dị
Ekele Linux Mint blog, Amụtawo m na ọ bụ ugbu a maka nbudata, ndị Linux Mint 18.1 Serena Xfce Edition Beta, dabere na Ubuntu 16.04 LTS na ebe desktọọpụ Xfce 4.12. Ọ nwere nkwado ruo afọ 2021, ọ na-abịa kwajuru na ngwanrọ emelitere, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndozi na atụmatụ ọhụrụ.
1 Linux Mint 18.1 Serena Xfce Edition Atụmatụ
2 Budata Linux Mint 18.1 Serena Xfce Edition Beta
2.1 Usoro chọrọ
2.2 Ntuziaka nkwalite
Linux Mint 18.1 Serena Xfce Edition Atụmatụ
Ederede a bụ Linux kernel 4.4 kernel na Linux-firmware 1.157.5, ọ gụnyekwara MDM (Mint Display Manager) njikwa njikwa 2.0, yana dum X-Apps suite (Xviewer, Xreader, Xplayer, and Xed).
Ọ bara uru ịmara mmelite nke menu ngwa Whisker na mbipute 1.6.2, nke ga - enyere gị aka ịnụ ụtọ igodo ụzọ igodo, ọchụchọ weebụ, ntụgharị emelitere na ndozi ahụhụ dị iche iche.
Edekwala mmelite mmelite ahụ, na-agbakwunye kọlụm ọhụrụ iji gosi mmalite nke nchịkọta, n'otu ụzọ ahụ, ugbu a, mmelite kernel gosipụtara.
N'otu ụzọ, e dochiela ya Banshee site na Rhythmbox, gbakwunyere atụmatụ ejiri na isiokwu na nchekwa nchekwa.
Can nwere ike ịlele na omimi na atụmatụ nke a version si Ebe a
Budata Linux Mint 18.1 Serena Xfce Edition Beta
Iji budata Beta ị ga-emerịrị ihe ndị a chọrọ, a naghị atụ aro ya maka ebe a na-emepụta ihe ruo mgbe ọ ga-abụ nke kwụsiri ike.
512MB RAM (1GB akwadoro maka ntụsara ahụ).
9 GB nke ohere diski (20 GB akwadoro).
Kaadị eserese nwere ike ịkọwa ihe karịrị 800 × 600 (1024 x 768 tụrụ aro).
DVD mbanye ma ọ bụ USB n'ọdụ ụgbọ mmiri.
64-bit ISO nwere ike buut na BIOS ma ọ bụ UEFI.
32-bit ISO nwere ike ibudata naanị BIOS.
A kwadoro 64-bit ISO maka kọmputa niile nke oge a (Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kọmputa niile e rere n’ime afọ iri gara aga nwere ndị nhazi 10-bit).
BEdị BETA a nwere ike ịnwe chinchi dị oke egwu, a na-atụ aro ka ị wụnye ya maka ebumnuche nnwale naanị yana iji nyere aka kpesa ahụhụ na ndị Linux Mint team tupu ịhapụ ụlọ anụ.
Ọ ga - ekwe omume ịkwalite site na ụdị beta a gaa na nsụgharị anụ ahụ.
Ọ ga-ekwe omume imelite site na Linux Mint 18. Nwelite ntuziaka ga-ebipụta ọnwa na-esote mgbe mbipute nke Linux Mint 18.1.
Cannwere ike ibudata ISOs na Xfce BETA (32-bit) y Xfce BETA (64-bit).
Obi abụọ adịghị ya, ndị hụrụ desktọọpụ ọkụ na Linux Mint kwụsie ike taa kwesịrị ime ememme, nnweta nke Beta augurs na n'oge na-adịghị anya anyị ga-enwe ụdị anụ anyị nwere ike iji kwa ụbọchị. Cheta na ozugbo awụnyere ISO na gburugburu achịkwa, onye ndu maka Ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Linux Mint 18.1 "Serena".
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Linux Mint 18.1 Serena Xfce Edition Beta dị